परिणाम > क्यालिफोर्निया > SuperLotto Plus > 07-18-2020
शनिबार, जुलाई 18, 2020 क्यालिफोर्निया सुपरलोटो प्लस विजयी नम्बरहरू र परिणामहरू
कसरी सुपरलोट्टो प्लस खेल्ने
खेलाडीहरूले १ र between 1 को बीचमा पाँच नम्बरहरू र एक "मेगा" नम्बर १ र २ between बीच छनौट गर्छन्। खेलाडीहरूसँग "क्विक पिक" को विकल्प पनि छ र तिनीहरूको लागि अनियमित संख्याहरू उत्पन्न गरिएको छ। प्रत्येक खेल $ १ हो। रेखाचित्र प्रत्येक बुधवार र शनिबार 47::1 बिहान PT मा लिन्छन् र त्यहाँ winning वटा जित्ने सम्भावनाहरू छन् - अधिक संख्यामा खेलाडीले खेल्छन्, उनीहरू बढि जित्छन्!
सुपरलोट्टो प्लस जित्ने विवरणहरू
टिकट बिक्री समापन समय, सम्भव संख्या, पुरस्कार प्रकार, र दिन को आकर्षित।
दिन र समय कोर्नुहोस्
रेखाचित्र प्रत्येक बुधवार र शनिबार :7::57 बिहान PT मा आयोजित गरिन्छ।
SuperLotto Plus FAQ हरू
के म CA सुपरलोटो प्लस टिकट अनलाइन खरीद गर्न सक्छु?
क्यालिफोर्निया सुपरलोट्टो प्लस टिकटहरू यस समयमा अनलाइन खरीदका लागि उपलब्ध छैनन्, तर CA पावरबल र मेगा मिलियन्स टिकटहरू छन्!
CA सुपरलोटो प्लस कहिले हो?
क्यालिफोर्निया सुपरलोटो प्लस रेखाचित्र हप्तामा दुई पटक बुधवार र शनिबार लिन्छ।
सुपरलोट्टो प्लस ड्राइंग कुन समय हो?
:7::57 बेलुका PT
सुपरलोट्टो प्लस ज्याकपॉट कति हो?
SuperLotto Plus jackpots एक रोलिंग आधारमा बढ्छ जबसम्म एक विजेता वा बहु विजेताहरू हुँदैनन्। तपाईले भर्खरको क्यालिफोर्निया सुपरलोट्स प्लस ज्याकपोट रकम यहाँ क्यालिफोर्निया सुपरलोट्टो प्लस ज्याकपट्स पृष्ठमा पाउन सक्नुहुन्छ।
के कसैले CA सुपरलोटो प्लस जित्यो?
जब सुपरलोट्टो प्लस ज्याकपट न्यूनतम ज्याकपट रकममा पुन: सेट हुन्छ, यो एक संकेत हो कि एक वा धेरै खेलाडीहरूले सबैभन्दा भर्खरको रेखाचित्रमा जितेका छन्।
CA सुपरल्टो प्लस विजेता नम्बरहरू के हुन्?
लोटरी.कट अनुप्रयोगमा वा लटरी.कट वेबसाइटमा पछिल्लो सुपरलोट्टो प्लस विजयी नम्बरहरू यहाँ प्रत्येक चित्रको अनुसरण गरी हेर्नुहोस्। क्यालिफोर्निया सुपरलोट्टो प्लस परिणामहरू पृष्ठ।